Hiriirri guddaan tokko har’a Lammiiwwan Oromootiin as Washington DC fi naannoo addunyaa keessatti geggeessamee jira. -
Hiriirri guddaan tokko har’a Lammiiwwan Oromootiin as Washington DC fi naannoo addunyaa keessatti geggeessamee jira.
WASHINGTON, DC — Hiriirri kun magaalaa Finfinnee magaalottii naannoo jiran kan Oromiyaa waliin wal qabsiisuuf master palan qopahaa’ee mormuu dhaan barattootaa fi uummata hiriira mormii geggeessu irratti tarkaanfii mootummaan fudhate mormuuf ture.
Ministrii dantaa alaa Ameerikaa-tti Itti gaafatamtuu Deeskii Itiyoopiyaa Vernelle Trim
Kanneen Washington DCtti hiriiran irraa xalayaa isaanii kan fuudhan ministrii haajaa alaa irraa itti gaafatamtuu deskii Itiyoopiyaa Vernelle Trim yoo ta’an kanneen maatii namoonni hiriira sana irratti duraa du’aniif gadda itti dhaga’ame ibsuu dhaan dhiittaa mirga namaa Itiyoopiyaa keessatti raawwatamaa jiru akka dhaabatuuf irratti hojjenna jedhan jechuu dhaan qindeessitoonni ibsaniiru. Hiriirri
fakaataan kutaalee US garaa garaa dabalatee biyyoota kan akka Afriikaa kibbaa Germany, Netherlands, Asustrlia, Switzerland, Sweden, Yemen fi kanneen biroo keessatti
Previous Marii hawaasni Oromoo biyya Yaman waliin godhame.
Next Hiriira Mormii Hawaasa Oromoo Biyya Suwiidin Kan Magaala Goteborg fii Skaaraa